NamasteNEPALI.com: ७ शक्तिशाली नेपाली महिलाहरु
७ शक्तिशाली नेपाली महिलाहरु
काठमाण्डौं । मर्यादाक्रममा नम्बर १ देखि चर्चित र लोकप्रियसम्म शक्तिशाली नेपाली महिलाहरु को– को होलान् ? यो प्रश्न बोकेर हामी विभिन्न ब्यक्ति र संस्थाहरुमा पुग्यौं । उनीहरुवाट आएका नाम मध्येवाट नै हामीले शक्तिशाली महिलाको नाम छनौट गरेका हौं ।
देशले ताकेको मर्यादाक्रममा उल्लेखित बरियतामा रहेका महिला, जो हाम्रो पहिलो प्राथमिकतामा परे । दोस्रो विधि थियो, सेलिब्रेटी, लोकप्रिय रहेका वा चर्चित संस्थामा आबद्ध भएका । त्यसैगरी मिडियाले महत्व दिएका वा दिईरहेकाहरु पनि माथिल्लो स्थानमा रहे । सामाजिक सञ्जालमा लाखौं फ्यान पालेर बस्न सफलहरुले पनि महत्व पाए ।
नेपालको इतिहासमा नै महिलाहरु शक्तिशाली पदमा विराजमान भएको यो नै पहिलो पटक हो भन्दा अतिउक्ति हुँदैन । जस्तो, राष्ट्रपति र सभामुख महिला नै छन् । चाँडै मुलुकले प्रधानन्यायाधीश समेत महिला नै पाउँदैछ ।
यी यावत विषयमा उभिएर हामीले शक्तिशाली महिलाहरुको छनौट गरेका हौं ।
पहिलो महिला राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारी
गणतन्त्र नेपालका प्रथम महिला राष्ट्रपति हुन् विद्या भण्डारी । समग्रमा पनि उनी नेपालको दोस्रो राष्ट्रपति हुन् । राष्ट्राध्यक्ष, देशको अविभावक हो । समग्र देशको अविभावकत्व प्रदान गरिरहेकी उनको प्रसस्त संबैधानिक अधिकार समेत रहेको छ । मर्यादाक्रमको हिसावमा समेत उनी १ नम्बर स्थानमा रहेकीछन् ।
न्यायमूर्ती सुशीला कार्की
न्यायपरिषद सदस्य समेत रहेकी सुशीला कार्की भावी प्रधानन्यायाधीश समेत हुन् । उनी ०७३ बैशाख १ देखि नेपालको प्रधानन्यायाधीश हुने टुंगो लागिसकेको छ । न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्ने कार्की पहिलो महिला हुनेछिन् । निडर र स्वच्छ छवीकी कार्की न्यायाधीश हुँदासमेत शक्तिशाली मानिन्छिन् ।
प्रधानन्यायाधीश बरियतामा चौथो नम्बरमा रहने ब्यवस्था छ ।
ब्यवस्थापिकाकी नेतृ ओनसरी घर्ती मगर
नेपालको पहिलो महिला सभामुख हुन् ओनसरी घर्ती मगर । ब्यवस्थापिका संसदले गर्ने सम्पूर्ण कामको नेतृत्व उनैवाट हुने गर्छ । संसदीय समिति गठन, छलफल र निर्णयहरुमा समेत उनकै नेतृत्वले काम गर्छ । हालैमात्र न्यायाधीसहरुको संसदीय सुनुवाई सम्बन्धी विवादमा उनकै हात रहेको थियो ।
सभामुख मुलुकको पाँचौं नम्बरको बरियतामा रहन्छिन् ।
शक्तिशाली सल्लाहकार अञ्जान शाक्य
सुरुको उनको पेशा गायिका हो । तर, क्रमश कुटनीतिक क्षेत्रमा उनी संलग्न हुँदै गइन् । उनी अर्थात सुन्दरी गायिका अञ्जान शाक्य । अहिले उनी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको किचन क्याविनेटको शक्तिशाली सदस्यको रुपमा कार्यरत छिन् ।
०६४ सालमा केपी ओली परराष्ट्रमन्त्री भएकैवेला उनी परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानमा उपकार्यकारी निर्देशक भइन् । अञ्जान प्रधानमन्त्री ओलीको साली समेत हुन् । उनी राजदुत हुने हल्ला छ, वजारमा । तर उनी निकट स्रोत भन्छ, उनी राजदुत नियुक्त हुने कुरा त छँदैछ, त्यो भन्दा पनि अहिले उनी नियुक्ति खुवाउने कार्यमा बढी सक्रिय छिन् ।
सदावहार सेलिब्रेटी रेखा थापा
फिल्म अभिनेत्री रेखा थापा नेपाली सेलिब्रेटीहरुमा सवैभन्दा माथि छिन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा २५ लाखभन्दा बढी लाइक पाएर बसेकी उनी संसारभरीका नेपाली माझ चिनिएकी मात्र छैनन् प्रिय छिन् र चासोको पात्र पनि भएकी छन् । नेपाली फिल्मको निर्मात्री समेत रहेकी उनले निर्माण गरेका सवैजसो फिल्म हिट र सुपरहिट भएका छन् ।
लडाकु विद्यार्थि नेता नवीना लामा
एमालेको भात्री संगठन अनेरास्ववियूको अध्यक्षमा सहज जीत निकालेर क्रियाशील छिन् नवीना लामा । सवैभन्दा शक्तिशाली भात्री संगठनको अध्यक्ष लामा हाल ठूला पार्टीका सम्पूर्ण भात्री संगठनहरुको एकमात्र महिला अध्यक्ष हुन् । लडाकु स्वभावकी लामाको मातहतमा हजारौं कार्यकर्ता तैनाथ छन् । भनिन्छ, उनको एक निर्णयले लाखौं विद्यार्थि आन्दोलित हुन सक्छन् ।
चासोकी प्रतिमूर्ति हिमानी शाह
ढलेको राजसंस्थाको जिउँदो–जाग्दो अवशेष हुन् पूर्व युवराज्ञी हिमानी शाह । उनको सुन्दरताको तारिफगर्ने मात्र होइन पारिवारिकरुपमा पीडित भएको समाचारले पनि उनी आम स्याम्प्याथी बटुल्न सफल छिन् । हिमानी ट्रष्ट नामक संस्था स्थापना गरेर समाज सेवामा लागेकी यिनी सेलिब्रेटी हुन् । लोकप्रियताको हिसावमा राजसंस्था कमजोर भएपनि हिमानी शाह आम नेपाली माझ प्रिय मानिन्छिन् । भुकम्पको वेला पीडितहरुलाई सहयोग गरेर समेत हिमानीले थप माया बटुल्न सफल भएको आम बुझाई रहेको छ ।
र, यी पनि शक्तिशाली
५ शक्तिशाली युवा महिलाहरुको छनौटका क्रममा अन्य धेरै नाम पनि आएका थिए । जस्तो– न्यायाधीसकोलागी सिफारिसमा परेकी सपना मल्ल प्रधान, उद्योगपति भवानी राणा, एमालेका तत्कालिन महासचिव मदन भण्डारीका छोरीहरु, सूचना आयोगकी आयुक्त यसोदा तिम्सिना, नायिकाहरु केकी अधिकारी र नम्रता श्रेष्ठ, तेक्वान्दो खेलाडी संगीना बैध, सीएनएन हिरो पुष्पा बस्नेत, बैंकर रवीना श्रेष्ठ, युवा राजनीतिज्ञ रामकुमारी झाँक्री, राजनीतिज्ञहरु सुजाता कोइराला आदिको नाम पनि कुनै न कुनै रुपमा आएका थिए । यिनै मध्येका नामवाट टिओके डेस्कले नाम छनौट गरेको हो ।
यसकारण छनौट ?
संसारमा शक्तिशाली मानिसको वारेमा जोड–घटाउ गरिन्छ र सार्वजनिक गरिन्छ । तर नेपालमा शक्तिशालीहरुको सूची सार्वजनिक गर्ने चलन छैन । को–किन शक्तिशाली भन्ने आम चासो हुनु स्वभाविक छ । त्यसकारण पनि हामीले शक्तिशालीहरुको सूची तयार गरेर सार्वजनिक गरेका हौं । शक्तिशाली छनौट गर्ने टिओकेको यो सुरुवाती अभियान पनि हो ।